Dị Iche Iche Njehie OST Faịlụ na Exchange Server igbe akwụkwọ ozi dị.
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Mmekọrịta Mmejọ
Dị Iche Iche Njehie OST Faịlụ na Exchange Server igbe akwụkwọ ozi dị
Nwere ike imeghe nchekwa na folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ, ma enweghị ike ịmekọrịta ha na ihe nkesa Exchange, ma ọ bụ zute ozi njehie dị iche iche na-egosi na mmekọrịta mmekọrịta na nchekwa Ihe Ndị Ehichapụ.
Njehie a pụtara gị OST faịlụ rụrụ arụ, ma ọ bụ otu ma ọ bụ karịa ozi email na OST faịlụ mebiri emebi na usoro mmekọrịta enweghị ike idozi ha.
Ọ bụrụ na ọ bụ otu ma ọ bụ ọtụtụ ozi email ezighi ezi na-akpata njehie ahụ, mgbe ụfọdụ ị nwere ike ihichapụ ozi ndị a iji dozie njehie ahụ. Ọzọkwa Microsoft na-enye OST Iguzosi ike n'ezi ihe ngwá ọrụ na ike idozi ụfọdụ obere mmekọrịta njehie dị ka mma. Otú ọ dị, maka most ikpe, ihe ngwọta kachasị mma iji gbochie ọnwụ data na njehie ndị ọzọ na-eji DataNumen Exchange Recovery, dị ka ndị a:
Mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta ya OST faịlụ.
chọta OST faịlụ na-akpata njehie. Nwere ike ikpebi ọnọdụ faịlụ dabere na ihe onwunwe egosiri na Outlook. Ma ọ bụ jiri search rụọ ọrụ na Windows iji chọọ maka OST faịlụ.
Naghachi data na-anọghị n'ịntanetị na OST faịlụ. The Exchange OST faịlụ ahụ nwere data na-anọghị n'ịntanetị, gụnyere ozi ozi na ihe ndị ọzọ niile, na igbe ozi Exchange gị, nke dị gị oke mkpa. Iji naghachi na-anapụta ndị a data, ị ga- ojiji DataNumen Exchange Recovery i scanomi ihe OST faịlụ, weghachite data dị na ya, wee chekwaa ha na faịlụ Outlook PST na-enweghị njehie nke mere na ị nwere ike ịnweta niile ozi na ihe na Outlook mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Weghachite nke mbụ OST faịlụ. Maka nchekwa, ị ga-akwado ya nke ọma.
Kpọgharia aha ma ọ bụ hichapụ ihe mbụ OST faịlụ.
Idozi njehie ahụ. Gbaa mbọ hụ na ntọala maka akaụntụ email Exchange na Outlook ziri ezi, na Outlook nwere ike ijikọ na ihe nkesa Exchange gị nke ọma. Mgbe restart Outlook na zipu / nata ozi ịntanetị gị na igbe ozi Exchange Exchange kwekọrọ, nke ga-eme ka Outlook mepụta faịlụ folda na-anọghị n'ịntanetị na-akpaghị aka ma mekọrịta data ya na igbe ozi Exchange.Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ profaịlụ ozi gị ugbu a ezighi ezi, ma ị ga-ehichapụ ya ma mepụta nke ọhụrụ, dị ka ndị a:
6.1 Mechie Microsoft Outlook.
6.2 Pịa Start, wee pịa Ogwe njikwa.
6.3 Pịa Gaa na Nlele Omuma ọ bụrụ na ị na-eji Windows XP ma ọ bụ nsụgharị dị elu.
6.4 Pịa ugboro abụọ mail.
6.5 Na Mbido Ozi igbe, pịa Gosi profaịlụ.
6.6 Họrọ otu profaịlụ na-ezighi ezi na listi ma pịa wepụ iwepu ya.
6.7 Tinyegharịa 6.6 ruo mgbe ewepụrụ profaịlụ niile na-ezighi ezi.
6.8 Pịa tinye iji mepụta profaịlụ ọhụrụ ma gbakwunye akaụntụ email dịka ntọala ha dị na sava ahụ.
6.9 Start Outlook na megharịa mmekọrịta gị na igbe akwụkwọ ozi Exchange, ị ga-ahụ nsogbu ahụ ga-apụ n'anya.
Mbubata data natara na nzọụkwụ 3. Mgbe gị OST nsogbu nsogbu faili na-edozi, debe nke ọhụrụ OST faịlụ maka igbe akwụkwọ ozi Exchange mepere, wee mepee faịlụ PST mepụtara na nzọụkwụ 3 na Outlook. Dị ka ọ nwere ihe niile natara data gị mbụ OST faịlụ, ị nwere ike i copyomi chọrọ ihe ọhụrụ gị OST faịlụ dị ka mkpa.